Chinja mafaera ePDF muDynamic Zvemukati neFlip PDF yeMac | Ndinobva mac
Jose Alfocea | | Mac zvirongwa
Iyo PDF (Portable Gwaro Fomati) fomati iri imwe yeanonyanya kufarirwa uye akapararira mafomati ekuverengakunyanya pamakomputa uye pakomputa makomputa kana mahwendefa ane saizi yakakura saizi. Nekudaro, sezvo iri fomati yekuverenga, musimboti, isinga gadziriswe, zvayakanakira zvakadzikiswa zvakanyanya sezvo saizi yechidzitiro chatinoshandisa nayo yakadzikiswa.
Kugadzirisa dambudziko iri tinaro Flip PDF, chishandiso cheMac (zvakare ine vhezheni yeWindows) yatingaite nayo nyore shandura mafaera ePDF kuenda kune mobile-inoshamwaridzika mafaera edhijitari kufanana neyedu iPhone. Uye zvakare, ikozvino tinogona kuiwana ne79% dhisikaundi pamutengo wayo wenguva dzose, saka iwo mukana wakanaka wekuwana rezinesi reupenyu.
1 Chinja chero chero PDF kuti ive yakasimba simba fomati
1.1 Chii chaungaite neFlip PDF?
Chinja chero chero PDF kuti ive yakasimba simba fomati
Flip PDF chishandiso chinokurudzirwa nevagadziri vacho kunyanya kune vaparidzi, vashambadziri, vagadziri uye vamwe vanyanzvi vane chekuita neizvi zvikamu, zvisinei, chokwadi ndechekuti pamutengo uyo wave kuwanikwa, unobatsira zvakanyanya kune vakawanda vashandisi vega, vadzidzi uye zvakajairika. , zvese izvo zvaunoda chinja mafaira emafaira ePDF kuita mashoma edhijitari, anonyanya kushanda uye anokwezva, kunyanya kana zvakagadzirirwa kugoverwa pamhepo.
Chii chaungaite ne Flip PDF?
Flip PDF inopa yakapusa, intuitive uye mushandisi-inoshamwaridzika interface, iyo yaunogona nayo:
Chinja "zvakajairwa" mafaera ePDF kuita mabhuku edhijitari
Gadzira mabhurocha edhijitari, ebook, zvigadzirwa zvigadzirwa, uye nezvimwe.
Goverana zvisikwa zvako zvakananga pasocial network
Gadzira mavhezheni akasiyana mafomati: .aoo, .html, .zip, .exe ...
Uye zvese izvi zviri pasi peyakareruka dhonza-uye-kudonhedza masimba aunogona kuisa pairi anopfuura zana matemplate, madingindira mazana mana uye mazana manomwe ekumashure pakati paunogona kusarudza.
Zvino, nekuda kweiyo «Mbiri Dhora reChipiri» kukwidziridzwa, unogona kuwana rezinesi rehupenyu uine 79% dhisikaundi pano, ndiko kuti, iwe uchave nekwaniso kune zvese zvidiki zvinyorwa uye kuunzwa kwemabasa matsva uye maficha nekusingaperi ne $ 19,99 chete panzvimbo yeyakajairika $ 99,99. Chii chimwe, kukwidziridzwa kunoenderera kwemazuva manomwe anotevera, saka uchine nguva yekutsvaga uye kuongorora kana Flip PDF ndicho chigadzirwa chaunoda. Zvichakadaro, ndinokusiya uine ino yekusimudzira vhidhiyo yeapp:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Chinja mafaera ePDF kuita zvemukati zvine simba neFlip PDF yeMac
Ndinoda kutaura kuti kambani muridzi weFlipPdf software ndeyekunyepedzera. Uye chinhu chakanyanya kushata chekuti kune akati wandei mapeji ewebhu senge ako pa internet ayo anongotaura zvishamiso zvekushandisa, uye hapana kana mumwe akawana izvo zviri kuseri kwechikumbiro. Izvo zvinoitika kuti iko kunyorera pachako kwakanaka kwazvo.
Iko kupi kubata ipapo? Mune mavanoshanda nemhando dzakasiyana.
PUBHTML5, FLIPHTML5, FLIPBUILDER pakati pevamwe.
Vanoramba vachichinja mamiriro. Mune mazhinji, ndeekuti iwe unofanirwa kubhadhara pamwedzi kana pagore mari asi serendi. Uye ivo vanosarudza 1 yeaya mabhurani mune ayo mamiriro ari kubhadhara uye rezinesi iri yehupenyu, zvine musoro ivo vanofambisa zvese kutenga kune iyo sarudzo.
Mushure megore unoona kuti izvi hazvisizvo wobva wanyunyutira kwavari, uye panguva iyoyo, ivo vakachinja mae-mail nema kero epanyama uye hapana anogona kuvawana.
Hazvina musoro kuti vanofanirwa kuita chitsotsi ichi, nekuti chishandiso pachacho chakanyanya kunaka.